गोरखामा लाख-लाख रुपियाँको बाजी : बाबुराम जित्ने कि नारायणकाजी ? - Internet Khabar
November 28, 2017 Internet Khabar
गोरखा । गोरखाको एउटै क्षेत्रबाट चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई जित्ने कि नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्नेबारे देशभरि चासोको विषय बनेको छ। तर गोरखामा चाहिँ भट्टराईले जित्ने कि श्रेष्ठले जित्ने भन्नेबारे लाख-लाख रुपियाँको बाजी थाप्न थालिएको छ।
खप्तड पुगेका पूर्व युवराज पारस स्व. राजा बिरेन्द्रले बनाएको भिआईपी पाहुना गृहमा बस्ने
मुगुमा मौसमी फ्लुको प्रकोप, दुई सातामा ९ को मृत्यु